Sida buug loo qoro oo loo daabaco | Suugaanta Wararka
Encarni Arcoya | 27/12/2021 09:00 | Buugaag
Maahmaah ayaa jirta in nolosha aad ku dhaqaaqdo saddex arrimood: ilmo dhasho, geed beera oo buug qor. Dad badan ayaa u hoggaansama saddexdaas dhismo, laakiin dhibku maaha in la sameeyo, laakiin waa in ay hadhow ilmahaas wax baraan, oo daryeelaan geedka oo ay daabacaan buug. Dhinacan u dambeeya waxaan rabnaa inaan joojino si aad u ogaato waa maxay tillaabooyinka sida buug loo qoro oo loo daabaco.
Haddii aad had iyo jeer dooneysay inaad wax qorto laakiin aadan weligaa go'aan ka gaarin inaad sidaas sameyso, markaa waxaan ku siin doonnaa dhammaan tallaabooyinka aad qaadi karto si aad u aragto inaysan sidaas u adkeyn. Waxa adag waa in lagu guuleysto buugga.
1 Talo ka hor intaanad buug qorin oo aan daabacin
2 Tallaabooyinka lagu qoro buug oo lagu daabaco
2.1 Sida loo qoro buug
2.1.1 Fikrad ka hayso
2.1.2 Samee qoraal
2.1.4 Waqtiga la hubinayo
2.1.5 Akhriste eber ha haysto
2.2 Sida buug loo daabaco
2.2.3 Daboolka, daboolka dambe iyo lafdhabarta
2.2.4 Ku dhaji
Talo ka hor intaanad buug qorin oo aan daabacin
Haddii aad xoogaa u fiirsato suuqa daabacaadda, waxaad ogaan doontaa inay jiraan saddex nooc oo daabacaad ah oo aad geli karto:
Ku daabac daabacaha, halkaas oo ay u xilsaaran yihiin qaabeynta, saxidda iyo daabacaadda. Waxay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo khasaaraheeda, maadaama daabacayaasha maanta aysan la mid ahayn kuwii hore (iyaga waxaad u tahay lambar iyo haddii iibkaagu fiican yahay markaas waxay bilaabaan inay si dheeraad ah kuu siiyaan).
Ku daabac "editorial". Waa maxay sababta aan u dhigno xigashooyin? Hagaag, sababtoo ah waa daabacayaal meesha aad ka bixinayso kharashka buuga lagu daabacayo. Waana qaali. Intaa waxaa dheer, waa inaad bixisaa lacag dheeraad ah si loo saxo, qaabka, iwm. Taasina waxay la macno noqon kartaa inay kugu dalacaan 2000 ama 3000 yuuro daabacaad yar.
Ku dhaji madax-bannaanida. Taasi waa, daabac adiga keligaa. Haa, waxay ka dhigan tahay inaad adigu naqshadayso oo aad saxdo, laakiin labadaas shay mooyaane, inta soo hartay waxay noqon kartaa bilaash maadaama ay jiraan goobo sida Amazon, Lulu, iwm. taas oo kuu ogolaanaysa inaad ku shubto buugaagta oo bilaash ah oo aad iibiso. Uma baahnid inaad lacag ku bixiso sidii aad warqad uga heli lahayd; Goobahan isku midka ah waxaad ka dalban kartaa nuqullada aad u baahan tahay qiimo aad u jaban.
Waxa ugu muhiimsan marka buug la qorayo maaha xaqiiqada daabacaadda, laakiin waa inaad ku raaxaysato oo aad ku raaxaysato habka, inaad sheekadaas ku dhex noolaato jidhkaaga. Xaqiiqda daabacaadda, iyo guusheeda iyo haddii kaleba, waa inay noqotaa mid labaad.
Tallaabooyinka lagu qoro buug oo lagu daabaco
Marka ay timaado in buug la qoro oo la daabaco, waan sameyn doonaa wadada u qaybi laba qaybood oo kala duwan. Labaduba way is-dhex-jiraan, haa, laakiin isku mar lama samayn karo oo haddii buuggu marka hore la dhamayn waayo, lama daabici karo.
Sida loo qoro buug
Qoritaanka buug uma fududa sida ay u muuqato. Waxaa laga yaabaa inaad haysato fikrad weyn, taas oo ah waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay, laakiin haddii aadan aqoon sida loo qaabeeyo iyo sida loo sheego Marka laga reebo folio ama laba, macno badan ma samaynayso. Haddaba, tallaabooyinka ay tahay inaad qaado si aad shaqada ugu dhaadhacdo waa kuwan soo socda:
Ma nidhaahno "fikrad wanaagsan", inkasta oo ay taasi ku habboon tahay. Ujeedadu waa taas Waad ogtahay waxa aad ka qori doonto, in aad haysatid qorshaha waxa dhici doona.
Tani waa wax si fiican iigu shaqeeya, taas oo sidoo kale awood u leh fikrad ka dhiibo kordhinta uu yeelan karo buugga cusub ama buugga aad qori doonto. Laakin, ka digtoonow, taasi ma noqon doonto qorshaha saxda ah. Caadi ahaan markaad tan qorayso way isbedeli doontaa, ku dari doonta cutubyo badan, isku ururinaysa kuwa kale ...
Hage noocee ah ayaa habboon inaad sameyso? Hagaag, wax la mid ah ogaanshaha waxa dhici doona cutub kasta oo aad maskaxda ku hayso. Markaa sheekadaadu waxay qaadan kartaa shakhsiyaddeeda iyo isbeddelkeeda, laakiin taasi waxay ku xirnaan doontaa wax badan.
Tallaabada xigta waa in la qoro. Maya mar dambe. Waa inaad ku rid wax kasta oo aad ka fikirtay dukumeenti iyo, haddii ay suurtagal tahay, si fiican loo habeeyey si sheekadu u sahlanaato in la raaco.
Tani waxay qaadan kartaa meel kasta laga bilaabo dhowr toddobaad, bilo, ama xitaa sanado, markaa ha niyad jabin. Waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa qor, adoon aad uga fikirin sida ay noqonayso. Waxaa jiri doona waqti taas. Hadafkaagu waa inaad gaadho kelmadda "Dhammaadka".
Waqtiga la hubinayo
ka dib u eegis ayaa badanaa la sameeyaa dhowr jeer, Ma aha mid keliya, gaar ahaan buugaagta ugu horreeya. Oo waa inaadan hubin oo kaliya in higgaadu sax tahay, laakiin in goobtu ay adag tahay, inaysan jirin geeso dabacsan, inaysan jirin dhibaato ama waxyaabo aan macquul ahayn, iwm.
Waxa ay qoraayaal badani qabtaan waa in buuggu in muddo ah nasto si, marka ay timaaddo soo qaadistiisa, ay ugu muuqato in ay ku cusub yihiin oo ay ujeeddooyin badan yihiin. Halkan waxay ku xirnaan doontaa qof kasta inuu doorto inuu ka tago ama si toos ah kuugu dhejiyo inaad dib u eegto.
Akhriste eber ha haysto
Un Akhristaha eber waa qofka akhriya buug oo ku siinaya ra'yigiisa ujeedo, adiga oo dhaleeceynaya waxa aad qortay, is weydiinaya su'aalo iyo xitaa kuu sheegaya qaybaha ugu fiican iyo kuwa ay tahay inaad dib u eegto.
Waa nooc dib-u-eegis ah oo hubiya in sheekadu leedahay adkeyntaas oo kuu ogolaanaysa inaad daabacdo.
Sida buug loo daabaco
Horayba waanu u haynay buuggii oo waxaa loo malaynayaa inaadan taabanayn wax taariikhda ka mid ah (tanoo leh nuances, dabcan). Markaa waa waqtigii laga fikiri lahaa daabacaadda, taasna, tillaabooyinka ay tahay inaad qaaddo waa kuwan soo socda:
Inkastoo talaabooyinkii hore aan ku sheegnay inaad dib u eegis ku sameyso riwaayadda inta aadan daabacin, runtu waxay tahay inaad haysato Xirfadlaha wax-akhriska maaha fikrad xun, taas lidkeeda. Waxayna tahay in qofkaasi uu noqon doono mid ujeedo leh oo uu arki karo waxyaabo aadan garaneynin.
Talaabada xigta waa habaynta buugga. Caadi ahaan marka aan wax qorayno waxaan ku sameynaa qaabka A4. Laakin Buugaagtu waxay ku yaalaan A5 waxayna leeyihiin margins, headers, footers, iwm.
Waxaas oo dhan si ay u muuqdaan kuwo wanaagsan waxaad u baahan tahay barnaamij wanaagsan (macluumaadka, kan inta badan la isticmaalo waa Indesign).
Tani waxay kuu oggolaanaysaa inaad haysato dukumeenti ku habboon daabacaadda oo qaab buug ah.
Daboolka, daboolka dambe iyo lafdhabarta
Maalgelin kale oo aad samayn doonto waa inaad samaysaa lahaado daboolka hore, jaldiga dambe iyo laf dhabarta buugga, taas oo ah, qaybta muuqaalka ah, iyo midda soo jiidan karta akhristayaasha si ay u qaataan buuggaaga oo ay akhriyaan waxa uu ku saabsan yahay.
Tani waxay noqon kartaa bilaash (haddii aad isticmaasho moodallo) ama lacag lagu bixiyo haddii aad codsato adeegyada naqshadeeyaha inuu kuu sameeyo.
Ugu dambeyntii, hadda oo aad haysatid dhammaan, waa waqtigii aad dhejin lahayd. Ama maya. Haddii aad rabto in daabacaad uu daabaco, markaas waa inaad dirtaa oo aad sugtaa inay ka jawaabaan..
Haddii aad door bidayso in aad kaligaa u soo saarto, taas oo ah, is-daabac, kaliya waa inaad aragto xulashooyinka. Mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la doortay waa Amazon, maadaama aysan wax kharash ah ku bixin si ay halkaas uga baxdo.
Dabcan, waxaanu ku talinaynaa in, Kahor intaadan sidaa yeelin, iska diwaangeli shaqadaada Hanti caqliyeed, oo xitaa hel ISBN si qofna uusan u xadin fikradaada.
Hadda oo aad taqaan sida buug loo qoro oo loo daabaco, miyaad qabtaa su'aalo kale oo ku saabsan? Na weydii annaguna waannu kuu jawaabi doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Sida buug loo qoro oo loo daabaco
Buugaagta Christmas-ka iyo sheekooyinka. Xulasho